Shiv Sakthi Villa-Yamkele ukuhlala kwakho neNdalo. - I-Airbnb
Shiv Sakthi Villa-Yamkele ukuhlala kwakho neNdalo.
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguVignesh
I-villa yaseShiv Sakthi ibonelela ngokuhlala okumnandi kondwendwe kwindawo ezolileyo nendalo. Le ndawo ikwi-Kumbakonam-Thanjavur Bypass kufutshane neValayapettai. Inika unxibelelwano olulula nolukhawulezayo kuzo zonke iitempile ezinkulu ezijikeleze iKumabakonam. Sinezindlu zokulala ezimbini kunye neHolo zixhotyiswe nge-AC kunye nezindlu zangasese zomntu ngamnye kwigumbi lokulala ngalinye.Sine-24 * 7 i-backup yamandla, inkonzo yokhuseleko, izibonelelo zokupaka, iiFama zeCOCO, iiGadi, i-BBQ Pits, i-Pool yamanzi ahlambulukileyo. Ukutya kuya kulungiselelwa ngokwesicelo.
Kwi-Shiv Sakthi Villa sinamagumbi okulala ayi-2, iholo enye, indawo yokuphumla eyi-1 yokutyela nomabonakude. Onke amagumbi kunye neHolo ine-air-conditioning. Omabini amagumbi adityaniswe namagumbi okuhlambela.
I-Shiv Sakthi Villa ingqongwe ziifama zeCOCO apho undwendwe lunokuzonwabisa ngendalo. Igadi ekhethekileyo eneentlobo ngeentlobo zeentyatyambo ezinqabileyo ziyafumaneka. Idama lamanzi amatsha liyinto eyahlukileyo kwipropati yethu xa kuthelekiswa namanzi amileyo kwezinye iipropathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Vignesh
Ifumaneka zonke iintsuku.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kumbakonam